(လောလောဆယ်) ပုံတွေ တင်ချင်ရင် ဒီလိုတင်လို့ရဒယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » (လောလောဆယ်) ပုံတွေ တင်ချင်ရင် ဒီလိုတင်လို့ရဒယ်
(လောလောဆယ်) ပုံတွေ တင်ချင်ရင် ဒီလိုတင်လို့ရဒယ်
ကျနော်များ မန်းဂဇက်မှာဆိုရင် လောလောဆယ် Media က နည်းနည်း ကွိုင်နေလို့မို့ ပုံတွေ တင်ရတာ အခက်အခဲလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကလည်း တာရှည် မနေပါဘူး။ သဂျီး ပြင်ပြီးတာနဲ့ ကောင်းသွားမှာပါ။ အခု မကောင်းခင် စပ်ကြား ပုံတွေ တင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ပုံတင်လို့ရတဲ့ အခြား နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပြောပါရစေဗျား။
ဒီလိုပါ …။ အင်တာနက် ပေါ်မှာပေါ့ဗျာ။ ပုံတွေကို ဝေမျှတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ များစွာရှိပါတယ်။ ဒီဆိုက်တွေမှာ မန်ဘာဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်း Free ပါပဲ။ ဆိုလိုချင်တာက ဒီလို ပုံဝေမျှတဲ့ ဆိုက်တွေမှာ ကိုယ် တင်ချင်တဲ့ ပုံတွေကို အရင်တင်၊ ပြီးမှ ပုံရဲ့ လင့်ခ်ကို ယူပြီး ဂဇက်မှာ ပြန်တင်ပေါ့။ ဒါဆို ပုံပေါ်ပါတယ်။
Facebook အသုံးပြုသူတွေဆိုရင်လည်း အရင်ဆုံး Facebook မှာ ပုံတင်၊ ပြီးရင် အဲ့ဒီ ပုံတွေရဲ့ လင့်ခ်ကို ယူပြီး ဂဇက်မှာ တင်လိုက်ပေါ့။ ဒီလိုနည်းတွေအားဖြင့် ပုံတွေ ပေါ်စေပါတယ်။
လုပ်ရမှာက ကိုယ် တင်ချင်တဲ့ ပုံ ပေါ်ကို Right-Click နှိပ်၊ ဒီအခါ ပေါ်လာတဲ့ Box ထဲက Copy Image Location ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဟာ ပုံရဲ့ လင့်ခ်ကို ယူလိုက်တာပါ။
ပြီးသွားရင် ဂဇက်ကို လာ၊ အရင်လိုပဲ ပုံတင်ဖို့အတွက် Post Box အထက်နားက Add Media လေးကို နှိပ်၊ ဒီအခါ ပုံတင်ရမယ့် Box ကြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါ ဘယ်ဘက် အခြမ်းကို ကြည့်လိုက်ပါ။ Insert From URL ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကို နှိပ်လိုက်ပါ။
http:// ဆိုပြီး ပြထားတဲ့ နေရာမှာ စောစောက ကိုယ်ယူထားတဲ့ ပုံရဲ့ လင့်ခ်ကို ထည့်လိုက်ပါ။ ဒီအခါ (ပုံလင့်ခ် မှန်ရင်) ပုံကို ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ပုံရဲ့ အောက်က Caption ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ ပုံအောက်မှာ ပေါ်စေချင်တဲ့ စာသားကို ထည့်ပါ။ Align ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ ပုံကို ဘေး အလယ် ဘယ်နေရာမှာ ထားချင်တယ်ဆိုတာကို ရွေးပေးချင် ရွေးပေးလိုက်ပါ။ အားလုံး ပြီးသွားရင် Insert into post ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Insert from URL မှ ထည့်ပါ။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေကတော့ ပုံတွေ မျှဝေတဲ့ နာမည်ကြီး ဆိုက်တွေပါပဲ။ အဆင် မပြေတာ ရှိရင်လည်း မပြေဘူးလို့ မှတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
ဟဲ့ .. ပလုတ်တုတ် ..
ပုံဂ ကွန်မန့်ထဲ ရဝူး ခည ….
ပို့စ်ထဲမှာ ပေါဒါ …
ငါ့ခမျာ ပုံပေါ်ဖို့ ၁၀ ခါလောက် လုပ်တာတောင်မရလို့
ပို့စ်ကို ပုံမပါပဲ တင်လိုက်ရတယ် ၊ ဟင်းးးး ဟင်းးးး
ခညား ဟာဂျီးက ပုံလင့်ခ် မှ မီဟုတ်ဘဲနဲ့ ..
ကျုပ်ကို လာနောက်နေဒယ် …
ခီညားဒို့လို ချာဂျီးဒွေဂ အ,ချင်ယောင် ဆောင်နေဂျဒေါ့
ကျုပ်လို ငဖွတ်က ညက်နှာပြောင်တိုက်ပီး တင်နေရဒယ် …
ဆရာအံ ရသွားပြီနော် ဟီးးးးး
ခညားကို ခညားပို့စ်မှာ ပြောထားဒယ်နော် ..
ကျုပ်ကို ဆရာလို့ မီခေါ်နဲ့ဂျ …
ကျုပ်က ငဖွတ် …
စမ်း ကြည့်ပါဦးမည် ချစ်အီ
အဲ ချစ်သော အံ
စမ်းဂျင်ရင်လည်း စမ်း …
မစမ်းသင့်တဲ့ နေရာဒေါ့ မစမ်းလေနဲ့ ..
ဟိုဒင်း ဟဝှါပြုတဲ့ ပုံတွေကော တင်လို့ ရမလား ဟင်
မောင့်ဘော .. မောင့်ဘော …
အာာဘွားးး … ဒဲ့ …
ချက်ချာဂျီး .. ခွိခွိ …
Comment ထဲ ပုံထည့်ဂျင်ရင်ဒေါ့ဖြင့်
ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ ထောင်လိုက်ပေဒေါ့ ယောက်ခမရေ …
အဲ .. ဆိုက်ထောင်လို့ ပေါဒါနော် ..
တော်ညာ အဒိဘယ် လွဲနေမစိုးညို့ ..
ဦးဦး ဘဘ အန်တယ်ဂျီးရေ ..
ဂုလို လာအားပေးတွားဒါ ကျေးဇူးဘာ ခည ..
ကျုပ်လဗြွတ်ပုံရိုက်တင်တာ မဆန့်လို့ အဲဒါ ဘိုလုပ်မဲ… ဆိုက်အသေးဆုံး ချုံ့တာတောင် လျှံထွက်နေတယ်…
wide screen မော်နီတာနဲ့ ပြောင်း သုံးလိုက် …
ထုထောင်း ချေမွှ ခွဲစိတ် ဖြတ် တောက် ပြီး
မှုန့် ညက်သွားမှ ဒါ့ပုံရိုက်လေ အူးကျောင်ရဲ့
ကျေးဇူးအားဂျီး တင်ဘာဒယ် … ဗျဲ …
လာပြောတာနောက်ကျတဲ့ အတွက် ဖိုင်းတပ်မယ်ကွာ
တို့ လေးပေါက်က အခုတလော ဖိုင်းပဲ တပ်နေပါလားနော်…………….
ဂလောက် ဖိုင်းတွေ တပ်နေဒါ …
စီးဘွားရေး အချေအနေ သိပ်မစွံဘူး ဖစ်နေဒယ် ထင်ဒယ် ….
အံ့ချာဒုန်းးးးးး ကျေးးဇူးးးးတွေ မတရားးးးတင်ဒယ်….
ကွမ်းးတစ်ယာ…ရေတစ်မှုတ် ထားးခဲ့သကွဲ့…..လိုအပ်သလို သုံးးးဆောင်ပေရော…
ကွမ်းတစ်ယာ ရေတစ်မှုတ် ….. ဒဲ့ ….
ကျေးဇူးတင်ရင် ရေတစ်မှုတ် လိုဘာဝူးရယ် … ဟီးးး
နောက်များမှ လုပ်မနေနဲ့ …
ပရော့ဖိုင်ပုံ တင်လိုက်အုံးဂျ ….
နောင်အမြဲသုံးဖို့ ဘုတ်မာ့ခ် လုပ်သွားပြီ ဗျို့…..
အများအကျိုးဆောင် ကိုယ့်အကျိုး ပြောင်…
အဲ- ကိုယ့်အကျိုးအောင် ပါစေ။
၆မျက်နှာက ၁၂ မျက်နှာ ဖြစ်ပါစေ။